Maninona ny horonan-tsarimihetsika ataonao no diso ny marika, ary inona no hatao amin'izany | Martech Zone
Maninona ny horonan-tsarimihetsika ataonao no diso ny marika, ary inona no hatao amin'izany
Zoma, Martsa 26, 2021 Zoma, Martsa 26, 2021 Manantena Morley
Fantatsika rehetra ny dikan'ny olona rehefa miteny izy ireo hoe “horonan-tsarimihetsika orinasa.” Raha teôria dia mihatra amin'ny horonan-tsary nataon'ny orinasa iray io teny io. Mpamaritra tsy miandany io taloha, fa tsy izany intsony. Androany, maro amintsika ao amin'ny marketing B2B no milaza orinasa Video miaraka am-panesoana kely.
Izany dia satria tsy mendrika ny horonan-tsarimihetsika orinasa. Lahatsary ataon'ny mpiara-miasa manintona loatra no anaovana ny horonan-tsary miara-miasa tao amin'ny efitrano fihaonambe. Ny horonan-tsarimihetsika dia manasongadina CEO iray be hatsembohana mamaky isa bala amin'ny teleprompter. Ny horonan-tsary Corporate dia famerenana hetsika iray manomboka amin'ny olona mahita ny mariky ny anarany eo ambony latabatra ary mifarana amin'ny mpijery mitehaka.
Fehiny, mankaleo, tsy mandaitra ary fandaniam-bola amin'ny teti-bolanao ny horonan-tsarimihetsika.
Ny orinasa dia tsy very maina hanohy hanao orinasa horonan-tsary. Amin'ny maha mpivarotra anao dia azonao atao ny misafidy ny hanao horonan-tsary mahaliana, mahomby ary mitondra valiny tena izy.
Misy dingana telo lehibe harahina hanombohana ny dianao lavitra orinasa Video ary miditra marketing amin'ny vidéo mahomby:
Atombohy amin'ny tetika.
Manambola amin'ny famoronana.
Matokia ny mpihaino anao.
Dingana 1: Atombohy amin'ny tetika
Most orinasa ny fandrindrana ny horonan-tsary dia manomboka amin'ny teny tsotra efatra: Mila horonan-tsary izahay. Ny tetikasa dia manomboka amin'ny ekipa efa nanapa-kevitra fa ny horonan-tsary no ilaina ary ny dingana manaraka dia ny fanamboarana an'io zavatra io.
Mampalahelo fa ny fitsambikinana mivantana amin'ny famokarana horonan-tsary dia mandingana ireo dingana lehibe indrindra. Ny horonan-tsarimihetsika dia nateraky ny tsy fisian'ny paikady video mazava sy natokana. Ny ekipa mpivarotrao dia tsy hiditra amin'ny sehatra sosialy vaovao na mpanohana hetsika raha tsy misy paikady sy tanjona kendrena, ka maninona no tsy mitovy ny video?
Ohatra: Umault - voafandrika anaty horonan-tsarimihetsika
Alohan'ny hidiranao amin'ny famokarana horonan-tsary dia makà fotoana hiasa amin'ny alàlan'ny paikady ho an'ilay horonantsary. Farafaharatsiny mba hamarino fa afaka mamaly ireto fanontaniana manaraka ireto ianao:
Inona no tanjon'ity horonantsary ity? Aiza no mety amin'ny dian'ny mpanjifanao? Iray amin'ireo lesoka lehibe indrindra nahatonga izany orinasa Ny video dia tsy manazava hoe aiza no misy ilay horonan-tsary ao amin'ny fantsom-pivarotana. Ny horonan-tsary dia mitana andraikitra samihafa amin'ny dingana samihafa amin'ny dian'ny mpanjifa. Ny horonantsary am-piandohana dia mila mitaona ny mpihaino hanohy hiara-miasa amin'ny marikao. Ny horonantsary tara farany dia mila manome toky ny mpanjifa fa mandray fanapahan-kevitra tsara izy ireo. Ny fiezahana manambatra ny roa dia mitarika mankany a korontana tsy mitovy.
Iza ny mpihaino kendrena amin'ity horonantsary ity? Raha manana be dia be ianao buyer personas, andramo ny misafidy iray ho tratrarina amin'ny horonan-tsary tokana. Ny fiezahana hiresaka amin'ny olona rehetra dia mamela anao tsy miteny na amin'iza na amin'iza. Azonao atao ny manamboatra kinova maromaro amin'ilay video hiresahana amin'ny mpihaino hafa kely.
Aiza no hampiasana ity horonantsary ity? Moa ve miantsoroka pejy fitobiana, alefa amin'ny mailaka mangatsiaka, manokatra fivorian'ny fivarotana? Ny horonan-tsary dia fampiasam-bola lehibe, ary takatra fa ny mpandray anjara dia maniry ny ho afaka hampiasa azy io amin'ny toe-javatra maro araka izay tratra. Na izany aza, mila milaza sy manao zavatra tena hafa ny horonan-tsary iray arakaraka ny teny manodidina hampiasaina izy io. Ny horonan-tsary amin'ny media sosialy dia mila fohy, mivantana ary mahitsy mankany amin'ilay teboka hampiasana ny mpijery hanakana ny horonam-boky. Ny horonantsary pejy fipetrahana dia voahodidin'ny kopia manome ny antsipiriany rehetra tadiavin'ny fanantenana.
Diniho ny manao kinova marobe amin'ny horonan-tsary amin'ny fampiasana samihafa. Ny mpamily vidiny lehibe indrindra amin'ny famoronana horonantsary dia ny andro famokarana. Ny fotoana fanampiny lany amin'ny fanovana kinova hafa na ny fanapahana kendrena dia fomba iray mahomby amin'ny famoahana mileage fanampiny tsy ho eo amin'ny toeranao.
Ny fandaniana fotoana hanazavana ny paikadinao, na miaraka amin'ny ekipanao na miaraka amin'ny maso ivoho, dia manazava izay tokony holazaina sy hataon'ilay horonan-tsary. Io irery no mandray ny dingana lehibe indrindra miala amin'ny faritany "orinasa", satria ho azonao antoka fa manana hafatra mazava, mpihaino kendrena ary tanjona kendrena ilay horonan-tsary.
Dingana 2: mampiasa vola amin'ny famoronana
Most orinasa miverimberina miverimberina matetika ireo tropes reraka ireo. Firy ny vidéo hitanao fa manomboka amin'ny fiposahan'ny masoandro ambonin'ny tany, avy eo zoma mankany amin'ny fihaonan-dàlana be olona misy teboka manerana ny mpandeha an-tongotra, famantarana izany fifandraisana? Ie. Mora ny manamboatra ireo horonan-tsary ireo ary mora ny mivarotra ny rojim-panapahan-kevitra, satria azonao atao ny manondro ohatra iray tapitrisa amin'izy ireo. Ny mpifaninana rehetra aminao no nahavita azy ireo.
Ary izany indrindra no mahatonga azy ireo tsy mandaitra. Raha manana horonan-tsary amin'ny fomba mitovy amin'izany ny mpifaninana aminao rehetra, ahoana no ahafahanao manantena ny mahatadidy izay anao? Adino avy hatrany ireo horonan-tsary ireo rehefa avy nijery. Ny Prospect dia manao ny fahazotoany ary manadihady anao sy ireo mpifaninana aminao rehetra. Midika izany fa hijerena ny horonan-tsarinao aorian'ny fifaninanana. Mila mamorona horonan-tsary ianao mba hahatsiarovan'ny prospect anao anao.
Raha nahavita ny enti-modinao ianao ary namorona paikady video feno, dia mety efa manana hevitra amin'ny fomba mahasarika hampitana ny hafatrao ianao. Ny zavatra tsara momba ny paikady video dia izy manala ny safidy famoronana amin'ny fifandirana. Ohatra, raha vao fantatrao fa te-hanao horonantsary Fanapahan-kevitra ho an'ny CIO any amin'ireo orinasa ambaratonga orinasa, azonao atao ny mikasa ny hanao horonantsary fijoroana vavolombelona hanome toky azy ireo fa miaraka amin'ny orinasa tsara izy ireo. Azonao atao ny manafoana ny drafitra rehetra anaovana horonantsary mitsangatsangana amin'ny vokatra na toerana marika marika manentana ny fanahy. Ireo horonan-tsary ireo dia mety mandeha aloha kokoa amin'ny dian'ny mpanjifa.
Ohatra: Deloitte - The Command Center
Ny hevitra mamorona dia tsy tokony ho famirapiratan'i Christopher Nolan. Ny tianao atao dia ny mitady fomba hiresahana mivantana amin'ny mpihaino anao amin'ny fomba mahasarika sy tsy hay hadinoina.
Ny fampiasam-bola amin'ny famoronana dia mihoatra ny hevitra momba ilay horonan-tsary fotsiny. Ny horonan-tsary B2B matanjaka matanjaka dia mila script mahaliana sy fahitana mazava napetraka amin'ny alàlan'ny tabilao alohan'ny hanombohan'ny famokarana. Ny horonantsary "orinasa" dia matetika a) tsy voasoratra na b) lisitr'ireo teboka miresaka nalaina ary nopetahana tamin'ny endrika script.
Mety ho mahery ny horonan-tsary tsy misy soratra, miankina amin'ny tantara tianao ho tantaraina. Mety tsara ho an'ny fijoroana vavolombelona na tantara mampihetsi-po izany. Unscripted dia tsy dia tsara loatra ho an'ny fanombohana vokatra na toerana misy marika. Rehefa ny hevitra momba ny horonantsary dia manadihady ny CEO, avy eo ianao dia mamindra ny famoronana ho an'ny CEO sy ny mpamoaka horonantsary izay mila manangona azy io ho zavatra mirindra. Izany dia matetika mitarika amin'ny fotoana lava aorian'ny famokarana ary hevi-dehibe tsy voavaha.
Ny mpanoratra an-tsoratra tsara dia afaka manao zava-mahatalanjona amin'ny fandikana ny hevitrao amin'ny endrika video. Ny fanoratana script amin'ny horonan-tsary dia fahaiza-manao manokana izay tsy ananan'ny mpanoratra manao kopia rehetra. Ny ankamaroan'ny mpanoratra kopia dia, amin'ny famaritana, tena tsara amin'ny famoahana atiny an-tsoratra. Tsy voatery ho mahay mamoaka atiny amin'ny haino aman-jery / sary izy ireo. Na dia manana copywriter ao an-trano amin'ny ekipa varotrao aza ianao, dia mieritrereta hanangona mpanoratra script manam-pahaizana momba ny horonan-tsarinao.
Dingana 3: Matokia ny mpihaino anao.
Very ny isan'ny fotoana nandrenesantsika kinova:
Izahay dia mivarotra amin'ny CIO. Mila ara-bakiteny isika raha tsy izany dia hahazo izany.
Azafady? Milaza ianao fa ny CIO an'ny orinasa lehibe dia mila ny zavatra rehetra natsipy ho azy ireo? Avy eo, hiteny ianao fa tsy tian'ny olona ny ankamantatra na ny tantara foronina.
Ny fahatokisana ny mpihaino anao dia midika hoe mino fa hendry izy ireo. Mahay amin'ny asany izy ireo. Te-hijery ny atiny mampiala voly azy ireo izy ireo. Fantatry ny mpijery fa varotra izany. Fa rehefa tsy maintsy mijery doka ianao, tsy aleonao ve toerana GEICO mampihomehy noho ny doka mpivarotra fiara eo an-toerana maina?
Raha sahirana ny mpihaino anao (ary an'iza tsy izany) dia omeo antony handaniany fotoana hijerena ny horonan-tsarinao. Raha averiny fotsiny ny teboka bala avy amin'ny takelaka fivarotana anao, dia azon'izy ireo atao an-tsaina izany. Ny horonan-tsary matanjaka iray dia manome ny antony hijeren'ireo mpijery 90 segondra ny androny.
Ny horonantsary matanjaka dia iray izay mitaona ny mpihaino anao, mampisaintsaina azy ireo ary manome lanja fanampiny ho azy ireo. Manome zavatra izay tsy azo angonina amin'ny takelaka fivarotana na infografika iray izy io. Ny horonan-tsarinao B2B dia tsy tokony ho soloina PowerPoint.
Ohatra: Nuance - Izahay, ny mpanjifa
Ny horonan-tsarimihetsika dia nitombo avy amin'ny toerana tsara. Rehefa nanjary mora azo ny horonan-tsary amin'ny maha mpanelanelana azy dia te hitsambikina amin'ny fironana ny orinasa. Ankehitriny dia takiana amin'ny marketing maoderina ity horonantsary ity, alao antoka fa mamorona horonan-tsary mampitombo ny varotra ianao ary mitondra ROI manan-danja. Corporate tsy hahatonga anao ho any ny horonan-tsary. Horonan-tsary misy paikady mazava, mahay mamorona ary matoky ny mpihaino azy fotsiny.
Sintomy ny torolàlana feno misy anay raha mila torohevitra misimisy momba ny fandosirana ilay fandrika horonantsary orinasa:
Fomba 7 hisorohana ny fanaovana horonan-tsary
Tags: horonantsary fandraharahanaorinasa Videomarketing amin'ny orinasadeloitteNuanceumaultvideo marketingpaikadin'ny varotra horonantsaryvideo marketing strategypaikadin'ny horonantsaryhoronan-tsary ho an'ny orinasa
Hope Morley dia COO an'ny Umault, masoivohon'ny varotra horonan-tsary B2B monina any Chicago. Niara-nampiantrano ny podcast izy Fahafatesana tamin'ny horonan-tsarimihetsika, seho iray ahitana fitaovana sy torohevitra hananganana horonan-tsary B2B tena tian'ny olona jerena.
Inona ny pejy hadisoana 404? Fa maninona no tena zava-dehibe izy ireo?
Loop & Tie: Ny B2B Outreach Gifting dia fampiharana iray amin'ny Salesforce eo amin'ny tsenan'ny AppExchange